Tababarka 1e Degree VOICE - GO! DUGSIYADA SPECTRUM (FULL-TIME // A-STREAM // CAMPUS RUGGEVELD)
sayniska, farsamada, injineernimada, xisaabta
spectrum School > koorsooyinka our > 1e Degree VOICE > 1e Degree VOICE
tababarka Barashada + Xirfadaha (A-Current) ee GO! Spectrumschool, Ruggeveld Campus
gudahood Darajada 1e A STEM socodka waxaan diirada saarnaa Xirfadaha qarniga ee XNIX. Maanta, tikniyoolajigu si dhakhso badan ayuu u kordhayaa. STEM waxay u taagan tahay Sayniska, teknoolajiyadda, injineernimada iyo xisaabta. Afartaan waa mid si weyn loola xiriirin karo. Maaddaama aad tahay "hooyo dijitaal ah" waxaad ku tababartaa xirfadaha macluumaadka, hal abuur, hal-abuur iyo dhibaato farsamo, fekerka xisaabinta, iyo wax badan oo dheeraad ah. Koorsadan waxaad isticmaali doontaa xirfadahan si aad u bilawdo codsiga (lego mindstorms, microbit, Adruino, ...), akhris-qoraalka warbaahinta, casriyeynta, xirfadaha IT, iwm. Saldhigga ugu wanaagsan ee tababarka mustaqbalka!
STEM gudaheeda waxaanu diiradda saari doonaa intii suurtagal ah Xirfadaha qarniga ee XNIX.
Waxaan dhisi doonaa dhammaan mashruucyada ku wareegsan Nidaamka injineernimada.
DHAMMAAN SHAQAALAHA KU SAABSAN WADDADA GO! SPECTRUM SCHOOL
Ma jeceshahay sayniska iyo farsamada? Miyaad codsan kartaa oo aad barnaamijka ka heli kartaa kombiyuutarka? Miyaad xiiseyneysaa makaanikada iyo korontada?
Ma ku guulaysatay sanadka 2e? Markaa waxaad ku bilaabi kartaa mabda'a jihada kasta ee heerka labaad. Waxaad sii wadi kartaa aqoonta nala soo xiriirta ee ku jirta aagga cilmibaarista STEM Electromechanics en Qalabka Korantada / Tiknoolajiyada Korantada Korontada
Kala tasho halkan miisaska casharka ee fasalka 1e A STEM socodka:
Sannadka 1e ee kooban (37KB, .pdf)
Sannadka 2e ee kooban (38KB, .pdf)